Heerka burburi Candy 410 Khiyaamada iyo tabaha - Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Qishka nacnaca nacnaca / Heerka burburi Candy 410 Khiyaamada iyo tabaha
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Agoosto 10, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf
Heerarka Burburinta Nacnaca Adag waa wax macaan oo aan qof kastaa ku raaxaysan. Laakiin kuwa sidaas sameeya, Waxaan hubnaa inay jiraan heerar fara badan oo ay ku heli karaan farxaddan. In kasta oo ay jirto jawi aad u xun oo kacsan oo ku xeeran heerarkaas oo ay weheliso qaylo iyo qaylo aan kasto oo aan ula kac ahayn, ka joojinaya Smartphone-ka isla markaana mar dambe la hubiyaa wixii waxyeelo ah, weligoodna aad ayey ugu riyaaqsan yihiin. Si loo xalliyo mid ka mid ah heerkaas oo kale, waxaan soo bandhigeynaa Heerka Candy Crush 410 Khiyaamada iyo tabaha.
Jellies waa cadowga guud ee ciyaartoyda Candy Crush. Jellies loo yaqaan, barafoobid, iyo waxyaabo kale oo badan, waxaa had iyo jeer lagu soo daraa ujeeddooyinka heerka haddii ay joogaan. Waxa xitaa ka sii daraya waa haddii qaabka heerarka uu leeyahay geesaha aan la arki karin iyo carqalada kale oo waxyaabaha ka dhigaya kuwo 'xiisaha leh'.
Ujeeddada heerka 410 waa mid aad u fudud in la sheego. Ka takhalus dhammaan 70 jellies iyo goolal 150,000 Dhibco; waxaas oo dhan gudaha 50 dhaqaaqdo. In kasta oo tirooyinka dhaqdhaqaaqa ay aad u sarreeyaan, Bambaanooyin ayaa leh 30 dhaqaajineysa margin iyo shukulaato sameeye hoose kaasoo ka dhigaya heerkan u muuqda mid aad u fiican halkii uu ka heli lahaa habeynka.
Heerka burburi Candy 410 Khiyaamada iyo tabaha:
Looma baahna in la qalloociyo, sida aan u rogayo hoos. Raac talooyinkan fudud iyo tabaha si aad u nadiifiso heerkan, oo ha ka cabsan inaad bixiso dhowr isku day. Waxaan haysannaa waxyaabo badan oo aan wax uga baranno guuldarradeenna sidoo kale. Marka, iyada oo aan la sii adkaysan, aan soo galno:
Waxyaabaha ugu horeeya marka hore, isha ku hay dhaqdhaqaaqyada hoosta halkii aad ka isticmaali lahayd dusha sare. Kaliya tani maahan waxay kuu suurtagelin doonta inaad go'aanno wanaagsan sameyso laakiin waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad sameyso nacnacyo gaar ah oo aad ogaan doontid, waa hanti heerkan ah.
Adiga kaliya ayaa leh 30 ka hor intaanu qarxin bambooyinka, marka iska hubi inaad marka hore baabiiso. Waxaad kula dhex mari kartaa nacnacyo caadi ah markasta oo ay suurogal tahay, ama waxaad isticmaali kartaa nacnacyo khaas ah oo isku darka ah si aad u soo qaaddo nacnacyo badan iyo jellies hal mar.
Xulashadaada ugu fiican waa inaad sameyso qulqulka seddex isku darka saameynta ugu badan, Tan waxaa ka mid ah iskudhiska bambo midab leh oo nacnac xarig leh ama xarig leh, iskutallaabinta laba bamboombo midab wada, ama ku dhaafida nacnac xarig leh oo nacnac soo duuban. Tani waxay kuu suurtagelin doontaa inaad ka soo baxdo jellies badan oo ay weheliso bambooyin ay adag tahay in la gaaro geeska.
Xusuusnow sameeyaha shukulaatada hoose? Hagaag, waxay kusii socon doontaa sameynta shukulaatada heerka oo dhan. Hubso inaad had iyo jeer shukulaato shukulaatada waqti ka waqti ama waa uu ka kori doonaa xakamaynta oo ay adkaan doontaa in la abuuro nacnacyo gaar ah. Waxay kaloo liqi kartaa nacnaca gaarka ah, kaa tuuraya gebi ahaanba wadada.
Ugu dambeyntii, loogu talagalay kuwa adag in ay gaaraan geesaha, Xulashadaada ugu fiican ayaa ah inaad abuurto oo aad u isticmaasho nacnaca khaaska ah iskudarka si aad uga qaado jelly meelahaas. Ciyaartoydu badanaa waxay awoodaan inay nadiifiyaan heerarka oo dhan laakiin waa dabacsan yihiin jellies geeska.
Waxay kuxirantahay qorsheynta guuritaankaaga si sax ah oo aad ka fileyso saameynta ay kuwaasi ku yeelan karaan hareerahaaga. Waxaan idin arki doonaa ragga soo socda; ilaa markaa, macaan joog!!!